Robledillo de Gata: Extremadura မြို့များရှိကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားသတင်း
Robledillo က de Gata
လူးဝစ် Martinez | | ဆွေမျိုး, Espana
Robledillo de Gata သည်တည်ရှိသည် valleyrago ချိုင့်ဝှမ်း, တုန်လှုပ်စေသောကျန်ကြွင်းသောအရပ်အကြားတည်ရှိသည် Sierra de Gata။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအခက်အခဲကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏လမ်းများ၏အလယ်ခေတ်နှင့်၎င်း၏အိမ်၏ထူးခြားသောဗိသုကာစသည့်အထူးသဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးအတွက်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားသောကျေးလက်မြို့တစ်မြို့၏အကောင်းဆုံးစံနမူနာရှင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Robledillo de Gata ကိုကြေငြာခဲ့သည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု။ သင်ကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုနှစ်သက်လျှင်ပြည်နယ်၏ဤမြို့ကိုသင်သိသင့်သည် Cáceres။ ငါတို့နှင့်အတူပြုပါ။
1 Robledillo de Gata မှာဘာတွေကြည့်ရမလဲ
2 Robledillo de Gata တွင်လုပ်သင့်သောအရာ
3 Robledillo de Gata မှာဘာစားရမလဲ
4 Robledillo de Gata သို့လာရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကားအဘယ်နည်း
5 Robledillo de Gata ရနည်း
Robledillo de Gata မှာဘာတွေကြည့်ရမလဲ
Extremaduran မြို့မှာထင်ရှားတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ၎င်း၏လမ်းများ၏အကွာအဝေးအကွေ့အကောက်များသောများသောအားဖြင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းငယ်များဖြစ်ပေါ်စေသောအိမ်များ၏သိုလှောင်ကန်အောက်တွင်များစွာရှိသည်။ သူတို့ကမတ်စောက်ပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းများဖြစ်ပြီးသင့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်လမ်းပို့ပေးလိမ့်မယ်။
အိမ်များသည် Robledillo de Gata ရှိထူးခြားသောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့တုံ့ပြန်ကြသည် လူကြိုက်များဗိသုကာ Cáceres၏ပြည်နယ်မှနှင့်တစ် ဦး စပ်စုဗိသုကာတူညီမှုကိုတင်ပြ။ သူတို့နှင့်အတူတည်ဆောက်နေကြသည် Adobe, သစ်သားနှင့် slate.
ယခင်နံရံများအတွက်အသုံးပြုသည်, အဆုံးစွန်သောထောင့်အတွက်သိသာသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုသစ်သားနှင့်ကျူပင်များဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်၊ ၎င်းတို့သည်အလွန်သိသာထင်ရှားပြီးအိမ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောလမ်းကြောင်းများကိုဖွဲ့စည်းသည်။
Robledillo de Gata ၏အိမ်များ
ဤရွေ့ကားဆောက်လုပ်ရေးကိုလည်းရှိသည် လသာဆောင်ပြေး နေနှင့်ထိတွေ့နေသောပြောင်းဖူးကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ခြောက်သွေ့စက်များ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအိမ်ရာအတွက်သာမကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပါရည်ရွယ်ထားလို့ပဲ ပထမထပ်သည်များသောအားဖြင့်ပထမထပ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ ဒုတိယထပ်သည်အထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌ gabled ခေါင်မိုးများကိုအာရဗီကြွေပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Robledillo de Gata ၏အဓိကဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး မှာ အဆိုပါယူဆချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း, တဆယ်ခြောက်ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်နှင့်စပ်စုဆhe္ဌဂံအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် Mudejar စတိုင်၌ရှိသော sacristy ၏အဖုံးနှင့်၎င်းသည်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည် Cristo လက်နက်နှင့်ကြီးစွာသောသရုပ်မှန်တင်ခဲ့သည်ထားတဲ့ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
ဒီဗိမာန်တော်ရဲ့ဘေးမှာ ၁၆ ရာစုကကက်စီးရက်မြို့ကအခြားရသေ့တောင် ၂ ခုကိုတွေ့နိုင်တယ်။ သိုးသငယ်၏ y အဆိုပါ Humilladero ၏။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် စန် Miguel ၏ရသေ့ ဒါဟာareaရိယာ၏ပုံမှန် slate နှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။
rrago မြစ်သည် Robledillo de Gata ၏အောက်ပိုင်းကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ ၎င်းရေ၏အားသာချက်အားဖြင့်အလယ်ခေတ်တွင်ဟိုက်ဒရောလစ်စက်တစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သံလွင်သီးကို နှိပ်၍ ဆီရရှိရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုလက်ရှိ Molino del Medio နှင့်အိမ်များဟုလူသိများသည် ရေနံပြတိုက်။ ၎င်းတွင်ထိုကုန်ပစ္စည်းကိုရရှိရန်အသုံးပြုသောရိုးရာစက်ယန္တရားများနှင့်တန်ဆာပလာများအားလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစတိုးဆိုင်ရှိသည်။
Robledillo de Gata တွင်လုပ်သင့်သောအရာ
rrago မြစ်သည် Extremaduran မြို့ရှိလူများနေထိုင်ရန်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည် သဘာဝရေကန် နွေရာသီမှာရေချိုးလို့ရတယ် သို့သော် Robledillo တွင်သင်လုပ်နိုင်သောအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်လမ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ခရီးနှင်ခြင်းဖြစ်သည် Sierra de Gata.
လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာ၎င်းကို ဦး တည်စေသည် Santo Tomé၏ရသေ့။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၄၅ မိနစ်မျှကြာသောကြောင့်လူတိုင်းအတွက်တတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လမ်းတွင်မင်းသည်အထင်ကြီးသောသစ်အယ်သီး၊ ထင်းရှူးပင်၊ နှင့်လည်းအဘို့ la Lagartera ရှုထောငျ့တောင်တန်းများကိုလှပစွာမြင်တွေ့နိုင်မည့်နေရာ။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းမှာ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည် Chorrituelo de Ovejuela။ ၎င်းသည်လှပသောသဘာဝရေကန်တစ်ခုတွင်သင်ရေချိုးနိုင်သည့်ရေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်လှေကားထစ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
The ရောမလမ်းလမ်းကြောင်း။ သစ်ပင်များ၊ ထင်းရှူးပင်များ၊ သစ်အယ်သီးများနှင့်စတော်ဘယ်ရီပင်များမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသော ၁၀ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင်ရှိသည်။
Robledillo de Gata ရှိသဘာဝရေကန်များ
Robledillo de Gata မှာဘာစားရမလဲ
Sierra de Gata ၏ gastronomy သည်ခမ်းနားထည်ဝါပြီးအင်အားကြီးမားသည်။ ၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုဖြစ်ကြသည် ဆီ y မှိုများ။ တကယ်တော့inရိယာ၌အပေါများရှိပါတယ် gurumelos, အဘယ်သူ၏သိပ္ပံနည်းကျအမည်ဖြင့် amanita ponderosa ဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများအတွက်ပြင်ဆင်သည်။
Robledillo de Gata တွင်သင်မြည်းကြည့်နိုင်သောပုံမှန်ဟင်းလျာများဖြစ်သည် အစအန; အဆိုပါ ချစ်သူဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ပဲ၊ က ပြောင်းဖူး; အဆိုပါ antruejo ဟင်းချို; အဆိုပါ Quince နှင့်အတူ နှင့် ယုန်စွပ်ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ဘေကွန်များပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်အသားများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ထွက်ပေါ်လာသည် ဝက်သူများ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူ Extremaduran ဟွတ် သို့မဟုတ် chanfaina.
အချိုပွဲသည်အရသာရှိပါသည် လိမ္မော်သီးအသုပ်အဆိုပါ mañegosကိတ်မုန့် နှင့်အားလုံးအထက်, ခမ်းနား ဒိန်ခဲ Cáceresပြည်နယ်ကနေ။ သူတို့နှင့်အတူ ရနောင်းဝက်ဆီရှိပြီးချိုသော ဘားအံမုန့်, ​​နို့နှင့်သကြားနှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သောက်ရန်, သင်သည်ထံမှစပျစ်ရည်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ် Sierra de Gata။ သူတို့တွင် Verdejo သို့မဟုတ် Palomino လူဖြူ.
Robledillo de Gata သို့လာရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကားအဘယ်နည်း
Sierra de Gata တစ်ခုလုံးက မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု ဆောင်းရာသီတွင်သမုဒ္ဒရာ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်သမုဒ္ဒရာရှိခြင်းတို့နှင့်အတူ။ ဤနောက်ဆုံးကာလတွင်ပျမ်းမျှခြောက်ဒီဂရီခန့်ရှိပြီးအပူချိန်အတော်အတန်နည်းသည်။
၎င်း၏အပူချိန်မှာ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိပြီးနွေရာသီသည်ပူနွေးသည်။ မိုးသည်နို ၀ င်ဘာမှAprilပြီလအထိများပြားပြီးအလွန်များပြားသောလများ၌အဓိကထားသည်။ နှင်းများကျလျှင်ရှားပါးသည်။
ထို့ကြောင့်၊ Robledillo de Gata သို့သင်သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များမှာ နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီ.
Robledillo de Gata ရနည်း
အကယ်၍ သင်သည်ကားဖြင့်သွားလျှင်ကာစီရက်မြို့ကိုရောက်သောဒေသတွင်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့က CC ကို-7.1 နှင့် CC ကို-7.2။ ကားရပ်ရန်သင့်အားအနီးရှိစတုရန်းကြီးတစ်ခုရှိသည် Humilladero ၏ရသေ့။ Robledillo ကိုဘတ်စ်ကားဖြင့်လည်းသွားနိုင်သည်။ Cáceresမြို့တော်ကို Sierra de Gata မြို့များနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောလိုင်းရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Robledillo de Gata သည်အလွန်လှပသော Extremaduran ရွာဖြစ်ပြီးထူးခြားသောဗိသုကာများ၊ လှပသောရှုခင်းများနှင့်အရသာရှိသောအစားအစာများကိုပေးသည့်ရှုထောင့်များကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။ မင်းသူ့ကိုတွေ့ဖို့ဝံ့သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Robledillo က de Gata
La Concha ကမ်းခြေ